Indawo egqwesileyo ye-46m² ephambi kolwandle enedama kunye nembono yolwandle. Ifakwe ngokupheleleyo, ikwimizuzu emithathu kuphela (200m) kumbindi wesixeko saseCumbuco, ineeklabhu zaselwandle kumacala omabini e-Condominium, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide okanye iofisi yasekhaya. Kwaye, ngokuqinisekileyo, i-kitesurfing.
Ebizwa ngokuba yiKite Haven 215, indawo yokuhlala ikwiCondominium Kariri Beach, imizuzu emi-3 (iimitha ezingama-200) ukusuka kumbindi weCumbuco. Indawo yayo engama-46 m², yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-Epreli ka-2021, ibonelela ngemeko-bume ebalaseleyo yokuhlala kwakho.
Ipropathi ine-Wi-Fi elungileyo kunye namagumbi amahle. Ibalcony iphangalele kwaye inesofa enkulu netofotofo, itafile kunye nezitulo ukonwabela umbono wechibi, ibha kunye nolwandle ngexesha losuku oluhle lwelanga. Igumbi lokuhlala likhulu kwaye linefeni yeenyawo, iTV kunye nebhedi yesofa, ekhululekile kumntu omdala okanye abantwana ababini abancinci. Ngaphezu koko, kukho ifriji yebhiya yokubonelela ngebhiya ebanda ngokwenene okanye nasiphi na esinye isiselo esibandayo emva kosuku olunelanga lolwandle, kwaye inokusetyenziswa njenge-minibar yesibini. Ukongeza, inesitulo sokufunda kunye nezibane ezingathanga ngqo zokuthuthuzela ngakumbi.
I-suite enkulu ine-air conditioning, ibhedi elingana nokumkani, izibane zokufunda, ukukhanya okungathanga ngqo, iiwodrophu ezine-hangers, kunye nesitulo sokufunda. Kwimeko yezifundo kunye neofisi yasekhaya, idesksi efakwe eludongeni (1m x 45cm), i-monitor ye-22'', kunye nentambo ye-HDMI ziyafumaneka. Igumbi lokuhlambela likhanya kakuhle kwaye lixhotyiswe ngesomisi seenwele kunye neshawari enamandla, kunye nokuhamba kwamanzi ngesisa. Ukongeza, amaphepha kunye neetawuli (kubandakanywa ne-pool) ziyafumaneka.
Ikhitshi ine-countertop enezitulo ezimbini zebha ukuze utye. Ukongeza, kukho iikhabhathi, i-minibar, umatshini wekofu we-Nespresso, i-microwave, i-dipenser yamanzi abandayo, isitovu, i-cooker hood, i-blender, kunye nezikhongozeli, iipani kunye nezinye izinto ezibalulekileyo. Kwakhona, kukho iyadi yenkonzo, enesinki kunye nomatshini wokuhlamba iimpahla.
Kwindawo eqhelekileyo, kukho amachibi okuqubha kubantwana nakubantu abadala, kuquka i-lap pool, evumela ukuqeqeshwa kokuqubha. Imekobume nayo inebhari, apho unokuthenga iziselo kunye nokutya. Kwakhona kunokwenzeka ukufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni.
Icondominium iphakathi kwamatyotyombe amabini aselwandle. Ngasekhohlo, sinetyotyombe laseVelas do Cumbuco elunxwemeni (kuyacetyiswa); ekunene, i-Aldeia beach shack inokufumaneka. Kuzo zombini, ungafumana ukutya, iziselo, indawo yokuqubha, i-massage, indawo yokudlala yabantwana, nokunye okuninzi.
Kwi-condominium, kukho iinketho ezimbini zesidlo sakusasa ezibonelelwa ngabantu besithathu kwindawo yokwamkela iindwendwe (i-R$40.00 ngomntu ngamnye ngoDisemba 2021, akukho bhukisho lufunekayo kwaye intlawulo yenziwa ngokuthe ngqo kwisiza). Omnye wabo, Indawo yokutyela yaseManacá, ibonelela ngesidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kwaye ikwaphethe ibhari yephuli.
Ukukhwela iBuggy ukujikeleza iindunduma zaseCumbuco zihlala zifumaneka phambi kwe-condo qho kusasa. Jonga izithuthi ezipakwe esantini kwaye uthethe ngexabiso lokukhenketha nomqhubi.